အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ အသက် ၉၂ ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်စကားဝိုင်း
အမေမာရဲ့ မွေးနေ့ကို စာရေးဆရာ ၊ ကဗျာဆရာများနဲ့ အတူ စာပေ၀ါသနာရှင်များနဲ့ လေးစားစွာ ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ ကဗျာဆရာ မောင်လွမ်းဏီ (ကျောင်းသားတပ်မတော်)မှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားနေတာပါ..
(ငါးရောင်ခြယ် ဆိုတဲ့ သုံးကြောင်းကဗျာရေးစပ်ခဲ့သူလေ)
ဆောင်းရာသီရဲ့ အေးမြမှုအောက်မှာ ဗမာဆန်ဆန် ကောက်ညှင်းဆီထမင်း၊ ပဲပြုတ်၊ ငါးခြောက်ကြော်၊ ရေနွေးကြမ်း၊ ကော်ဖီတို့နဲ့ ဧည့်ခံပြီး အမေ့မာအတွက် ဂုဏ်ပြုစပ်ဆိုထားတဲ့ ကဗျာတွေကို အnter;">မှတ်တရ ရွတ်ဆိုကြပါတယ်။
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ကဗျာဆရာပွင့်သစ်(ကရိန်ကန်)က ခုလို ပိုင်နိုင်စွာ ပွဲထိန်းသွားပါတယ်။
(ဘလော်ဂါ ကိုဖိုးဇေ ဆိုတာလဲသူပဲပေါ့..)
ကျမကို မတွေ့ဘူးမဟုတ်လား။ ကျမက ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတင်သူလေ။ ဘယ်တွေ့မှာတုန်း......
ဒီပုံတွေကို ဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲက ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြီး တင်ပေးထားတာလေ၊ ဓါတ်ပုံကင်မရာမရှိလို့..(သနားစရာ....)
(အမေမာ မြင်ချင်သလို တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားပါ့မယ်လို့ ဒီနေရာက ဂတိပေးပါတယ်။အစဉ်အမြဲ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်သလို ပြည်သူကချစ်တဲ့ အမေမာ ကျန်းမာပါစေ။ အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ .....)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:35 PM 1 comment:
နိုဝင်ဘာလ လယ်က ချင်းမိုင်အသွား လမ်းမှာ ၀င်လည်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းတောင်လို့ ခေါ်တဲ့ တောင်လေး အကြောင်းကို ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ ကြွားပါရစေ..
အဲဒီတောင်ကို လှမ်းမြင်ရတော့ ပန်းသိပ်မကြိုက်တဲ့ ကျမ ရင်ထဲမှာ လွမ်းသလို.. ပျော်သလို ဖြစ်သွားမိတယ်.. အဟုတ်… လူက နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်…
မနက် အစောကြီးထပြီး ကားစီး…… လမ်းကလည်း အကွေ့အကောက်များတဲ့ တောင်ပတ်လမ်း..
စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါတော့..အစားလည်း မစားနိုင် … ကားမူးတတ်တော့ မအန်အောင် ဆေးသောက်ရတာရယ်.. နေမကောင်းလို့ သောက်ရတဲ့ဆေးရယ်..အမလေး .. လူဆိုတာ ကားပေါ်က ခေါင်းတောင် မထူနိုင်ဖြစ်နေချိန်..
ဟဲ့ ဟဲ့ ပန်းတောင်ကို ကြည့်ပါဦး မြင်နေရပြီ… ရောက်တော့မယ်..
အတူသွားတဲ့ ခရီးဖော်က အတင်းနှိုးလို့ ထရပေမယ့် စိတ်က သိပ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူး..
ဘာလုပ်ရမှာလဲ ပန်းတောင် ဆို တာ ဘာညာ ဘာညာ..စိတ်ထဲက ပွစိပွစိ..
အားပါးပါး….တယ်လှပါလား…ကိုယ့်မျက်လုံးတောင် ကိုယ်မယုံလို့ ပွတ်သတ်ကြည့်ရသေးတယ်… အိပ်မက်များလားပေါ့.. ကိုယ်တယောက်တည်း ရောက်ရတော့ အိမ်က သံယောဇဉ်ကိုလဲ သတိရမိသေးတော့တယ်.. အော် ... မိသားစုလေးနဲ့သာဆိုရင်.....( အဲလို....လဲ....ပြောထားဦးမှ)
အဲဒီခရီးက မနက် ၆ နာရီက စီးလိုက်ရတဲ့ကား…ည ၆ နာရီကျော်မှ တည်းရမယ့် ဟိုတယ်ရောက်တော့တယ်…ဒါပေမဲ့ ပင်ပန်းတာတွေက ပန်းတောင်ကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ တန်ပါတယ်လို့ ခရီးလမ်းကြောင်း စီစဉ်သူများကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ရသေးတယ်..
(တကယ်ဆို ၄ နာရီပဲ ဝေးတဲ့ခရီးကို လုံခြုံရေး အစီအစဉ်အရ ကွေ့ပတ်မောင်းနေရလို့လေ..ကျမတို့ ဆူညံဆူညံ မပြောအောင် စီစဉ်ပေးထားတာ)
ကဲ .. ကျမ မြင်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းတောင်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပြလိုက်ပါဦးမယ်.. လာလေရော့..
ကြည့်ပါဦး ပန်းပင်လယ်ကြီးဖြစ်နေတာ ကင်မရာထဲ ၀င်သလောက်ပဲ မြင်ရလို့
ဒီလို နေကြာရိုင်းတွေချည်းပေါ့(ပန်းခူးမိရင် တပွင့် ဘတ် ၅၀၀ ဒဏ်တပ်မတဲ့)
လူကိုသေးနိုင်သမျှသေး ပန်းများများပါအောင် ရိုက်ပါဆိုတာတောင်မှ ...
အဲဒီမှာ မျှော့ လူမျိုးဝတ်စုံကလေးတွေနဲ့ ကလေးလေးတွေလေ.. အဲဒီဝတ်စုံတခါဝတ် ဘတ် ၃၀ ကို ၀တ်ထားတာ ချစ်စရာလေးတွေ မို့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တာ.. ကျမ ၀တ်ထားတာလဲ မျှော့လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာ ဘောင်းဘီလေး ဆိုတော့ ကွတ်တိပေါ့...
တကယ်ဆို ကျမတို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာလဲ အဲလိုနေရာတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာတုန်းက ကျမက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သူဆိုတော့ ပင်လယ်ဖက်ကိုပဲ ကျွမ်းကျင်ခဲ့သူ။ နောက် ကယားပြည်နယ်ဖက်မှာ နေခဲ့တော့လဲ တောင်ပေါ်ဒေသ ရွာတွေ ပေါ်မှာပဲ နှံ့စပ်အောင် သွားလာနေခဲ့ရသူ ဆိုတော့ ပန်းမြို့တော်ဆိုတဲ့ မေမြို့ကို မရောက်ဖူးခဲ့ဘူး။
ဒါမဲ့ ဒီလိုနေရာမျိုးကို နိုင်ငံခြားသားတွေပါ လာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ထိုင်းအစိုးရကိုတော့ ချီးကျူးရမှာ အမှန်ပဲ.. တောင်ကြောတလျှောက်လုံး ဒီလို ပန်းတွေ အလေ့ကျ ပေါက်လေ့ရှိတာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ၀င်ငွေရှာတာကတော့ အစီအစဉ် ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရပြီး နိုင်ငံသစ်တည်ချိန်မှာ ဒါမျိုးနေရာလေးတွေ ရှာပြီး ကမ္ဘာလှည့်တွေကို ဆွဲဆောင်ရဦးမယ်။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာဆို အားလုံး ရှိနေတာပဲဟာနော်။
(အားတင်းထားဟ..ရေခဲပြင်တွေလဲရှိ.. ပင်လယ်ကမ်းစပ်လဲရှိ.. လယ်ကွင်းကျယ်တွေ... တောင်တန်းတွေ ... အာပါးပါး .. တွေးကြည့်ရတာ တောင် အများကြီး)
ကဲ နေမကောင်းရက်နဲ့ သွားခဲ့ရတဲ့ ခရီးစဉ်က အမှတ်တရလေး ကို မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:15 PM 8 comments:
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းမှာ စက်တင်ဘာဆန္ဒပြပွဲတွေအပေါ် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုတွေကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း ထပ်တိုးမှု၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေအပေါ် စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂက အထူးပင် စိုးရိမ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီမူကြမ်းကို မနေ့က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ထောက်ခံသူ ၈၈ ဦး ကန့်ကွက် ၂၄ ဦးနဲ့ ကြားနေ ၆၆ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကန့်ကွတ်သူများက တရုတ်၊ ရုရှ၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကျူးဘား၊ ဗင်နီဇွဲလား ၊ (အာစီယံမှ) မလေးရှား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ကြားနေမဲ ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အာစီယံထဲက အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ထိုင်း ၊ ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ဘရူးနိုင်း တို့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားကတော့ ညီလာခံကို အစကတည်းက မတက်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာစီယံနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံစလုံးက မထောက်ခံတာကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သတင်း ..ဒီဗွီဘီ၊ အင်တာနက်ထဲမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှား တနိုင်ငံ က ထောက်ခံမဲ ထည့်တယ်လို့ တွေ့လိုက်ရတယ်)ကျမတို့ ဘာတွေစဉ်းစားရတော့မလဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်က ဘာတွေသုံးသပ်ကြည့်ရမလဲ။ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားမိတာက ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက်၊ ကျမတို့ ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကိုမှ အားကိုးလို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ ပါပဲ။
ကျမတို့နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး တရုပ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ထိုင်းလို နိုင်ငံမျိုးတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ၊ သူတို့ ပြည်သားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို သာ ကြည့်ကြလိမ့်မယ်။ နောက် ကျမတို့ နိုင်ငံက ခုလို မတိုးတက်လေ သူတို့ ခေါင်းပုံဖြတ်လို့ ရလေလို့ တွေးထားပြီး ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အထင်အရှားတွေ့နေရပြီ။ ဒီတော့ သူတို့လို အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံ မတိုးတက်လေ ကြိုက်လေ ၊ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ အသိပညာမရှိလေ သူတို့ တိုင်းပြည် အကျိုးအမြတ်ရလေ ဒီလိုပဲ သဘောထားနေတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်နေရပါပြီ။ ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ သူတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ဒေါသထွက်နေယုံနဲ့ ပြီးမလား။ ကန့်ကွက် နေယုံနဲ့ ပြီးမလား။တကယ်တော့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့က သူတို့ အစိုးရတွေဟာ သူတို့တိုင်းပြည်နဲ့တကွ ပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက် တကယ့်ကို အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ အာဏာရ အစိုးရတွေပါပဲ။ ကျမတို့ နိုင်ငံက အာဏာရူးတွေသာ တိုင်းပြည်အကျိုးတို့ ပြည်သူအကျိုးတို့ကို နားမလည်တာပါ။ အိမ်နီးချင်းအစိုးရတွေက သူတို့ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် တခြားတိုင်းပြည်က ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ် ၊ ဘယ်လို သတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ် ဆိုတာကို လျစ်လျှူရှုထား နိုင်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လှုပ်ရှားမှ ဖြစ်မယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်လူမျိုးကိုမှ အားကိုးလို့မရဘူး ဆိုတာကို ကျမတို့ ရင်ထဲ အသည်းထဲက စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားဖို့လိုတယ်။
ကျမတို့ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကနေ သူတို့ ဥပဒေအတွင်းကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးကြရမယ်။
ကျမတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးဟာ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် တစိတ်တည်း တ၀မ်းတည်း ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက် လုပ်ပြနိုင်တယ်၊ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နိုင်တယ် ဆိုတာကို သက်သေပြကြရမယ်။ မျိုးဆက် တဆက်မကတော့ဘူး ဒီတိုင်း စတေးနေကြရတာ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ စစ်အုပ်စုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နောက် စစ်အုပ်စုအားပေး အာစီယံ နိုင်ငံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေကို အာစီယံနိုင်ငံတွေက ပြည်သူတွေကပါ စာနာ နားလည်နိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။ သူတို့ အစိုးရကို သူတို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က ပြောနိုင်အောင် ကျမတို့ လှုံ့ဆော်ရမယ်။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်း ပြန်ကြော်တဲ့နည်းကို သုံးရမယ်။အဲဒါတွေ လုပ်ဖို့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း စည်းလုံးရမယ်။ တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ရနိုင်သလောက် ကိုယ်လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ကြရမယ်။ နောက်ဆုံး ဗမာပြည်က ဘယ်လူမျိုးမဆို သိပ်စည်းလုံးတယ် ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကို ကျမတို့တကယ်ချစ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့ခံစားသွားရအောင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြင်ပရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းက ကြိုးစားကြရမယ်။
ခု တလော စင်္ကာပူက လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျမက သိပ်သဘောကျ ထောက်ခံမိတယ်။ စင်္ကာပူဆိုတာ စစ်အုပ်စု အားကိုးရာ အာစီယံနိုင်ငံတခု ဖြစ်တဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ ငွေစာရင်းတွေ ၊ သူတို့ အုပ်စုတွေရဲ့ တထောက်နားရာစခန်းတွေ ၊ ဆေးကု စာသင် ဈေးဝယ်ထွက်ရာမြေ၊ ဒီလိုမြေမှာတောင် သူတို့ မလုံခြုံတော့ဘူး ၊ သူတို့ကို မထောက်ခံသူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ခံစားသိနေစေရအောင် သေသေသပ်သပ် လုပ်ပြတတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျမက လေးစားဂုဏ်ယူနေမိတယ်။ အာစီယံနိုင်ငံတိုင်း၊ နောက်တဆင့်တက်လို့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းနိုင်ငံပေါင်းစုံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကနေ စင်္ကာပူလို မျိုး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ စစ်အုပ်စုကို စိန်ခေါ်မှုတွေ ရက်ဆက် ပြနေရမယ်လို့ ကျမက ခံယူမိတယ်။
စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဟာ နအဖလို စစ်အုပ်စုအတွက် အဆုံးမသတ်တဲ့ စိန်ခေါ် တိုက်ပွဲရက်တွေပါပဲ။ပြည်တွင်းက လူတွေက အသက်တွေ ဘ၀တွေ ရင်းနှီးနေချိန်မှာ တိုင်းပြည်ပြင်ပက သွေးချင်းတွေက အဲဒီလူတွေ အတွက် ကိုယ့် အချိန်တွေကို ပေးဆပ်ပြကြစေချင်ပါတယ်။ လုပ်အားတွေကို ပေးဆပ်ပြရမယ်။ တတ်နိုင်သမျှငွေကြေးတွေနဲ့ ပေးဆပ်ပြရမယ်။ကိုယ်သန်ရာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ပေးဆပ်ပြရမယ်။
ကဲ … ဘလော်ဂါသွေးချင်းတို့ရေ…
ကိုယ်တတ်နိုင်သလို နည်းလမ်းတွေနဲ့ စတင်လိုက်ကြရအောင်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:12 PM No comments:
ဂုဏ်ယူလျှက်ပါ စင်္ကာပူမှ သွေးချင်းများ
လမ်းပြကြယ်မှာ တင်ထားတဲ့ သတင်းနဲ့အတူ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်နဲ့ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများ November 20 ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မှတ်တမ်းပုံတွေပါ။
"Concern for Burma" အဖွဲ့ကနေ ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့ပြီး OBP, Oway, LPK library, DTASG နဲ့ intellectual, religious people အဖွဲ့တွေအားလုံး ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို တင်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အာစီယံအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြုမူဆက်ဆံပုံတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် တကယ့်စာနာမှုတွေ နဲ့ ဆက်ဆံမယ့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်မဖြစ် သုံးသပ်ချက်တွေကို ဆောင်းပါး ဆက်တင်ပေးပါဦးမယ်။
(ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကိုယ်သာလျှင် ကြိုးစားရပေမည်)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:55 PM 1 comment:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:53 PM9comments:
ဘလော်ဂါအချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာ ရေးသားစေချင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလေ့ရှိတာကို တက်(Tag) တယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ညီမလေး ဂျစ်တူး၊ တူမလေး နှင်းသဇင်၊ မောင်လေး Zero Trash တို့ရဲ့ တက်ထားခြင်းအပေါ် နောက်ဆုံးကနေ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျစ်ရေ... လာမယ်နော် နောက်တလှည့်၊ နှင်းသဇင်လေးလည်း မကြာမီ လာမည်လို့....
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို အရင်မိတ်ဆက်ရရင်…….. (ဓါတ်ပုံမြင်ဖူးသူလဲ ရှိမှာပါ၊ ဓါတ်ပုံတင်ပေးသင့်တယ် ဆိုလဲ ပြောကြပါ ၊ အင်း တင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ ကွီ....)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညှာမတာ ပြောပြမှာပါ….
၁) မျက်နှာကျပုံကတော့ လုံးလုံး(၀ လာလို့ဖြစ်မှာပါ)
၂) မျက်ခုံးမွှေးနည်းပါတယ်။ ဒါမဲ့ မျက်ခုံးပေါက်ပုံက လှတော့ အဲဒီပေါ်မှာ ခဲတံနဲ့ထပ်ဆွဲ လိုက်ရုံပါပဲ။(ဟဟ)
၃) နှာတံပေါ်ပေမယ့် နှာတံမချွန်ပါ။
၄) မျက်လုံးမျက်ရစ်လှပေမယ့် မျက်တောင်တိုပြီး ပါးတော့ မပေါ်လွင်တော့ပါ။ ( မျက်တောင် စိုက်ရင် လှမယ် ဆိုတာသိပေမယ့် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေနဲ့ အသက်အရွယ်အရ အလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်)
၅)နှုတ်ခမ်းလှပေမယ့် ပါးစပ်ပြဲပါတယ်။(ဒါပေမဲ့ သွားတွေကတော့ လှမှလှလို့ လူတကာပြောပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အမြဲပဲ ရယ်နေပါတယ်)
၆) အရပ် ၅ ပေ ၂ လက်မပဲ ရှိပေမဲ့ ပေါင်ချိန်ကတော့ ၅၄ မှာ မနည်း ရပ်အောင် ထိန်းရင်း ကျော်သွားခဲ့ရင်လဲ မသိမသာမေ့ထားလိုက်ပါတယ်။( အသက်က ၄၀ ကျော်နေပြီကိုး)
၇)အဓိက အသားရောင်ကတော့ ဖြူဝင်းလှပစိုပြေပါပေတယ် ဟဲဟဲ ဒါလေးကယ်ပေလို့။
၈) ဆံပင်အရောင်ကတော့ ဖြောင့်စင်း မဲနက်နေဆဲ ၊အဖြူရောင်တွေ မလာသေးပေမဲ့ (ခုတလော နီညိုရောင်ဆိုးထားပါတယ်) ဒါကတော့ ပျင်းတာနဲ့ ကလိကြည့်လိုက်တာ။
၁) ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်ပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။(ကြည့်မိရင် မပြောနဲ့လို့ တားမှာစိုးလို့) အမှန်တွေပြောတတ်လွန်းလို့ နောက်ကွယ်ရန်သူ ပေါများပါတယ်။
၂) သူတပါးကို မတရားလုပ်နေတယ်လို့ မြင်မိ ခံစားမိရင် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပဲလဲ ပြသနာထဲကို သေသေချာချာ ၀င်ပါတတ်ပါတယ်။
၃) တယောက်နဲ့တယောက် အမြင်မှားပြီး တည့်တည့်မရှင်း ကွယ်ရာက ပြောနေသူတွေ တွေ့ရင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ပြောနိုင်အောင် တည်ပေးတတ်ပါတယ်။ ( တယောက်စကား ဟိုတယောက်ကို သွားပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ သူတို့ ၂ ယောက်ကို ဆုံရှင်း ခိုင်းတာ)
၄) ကိုယ် ဂတိပေးပြီးရင် ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ မဖောက်ဖျက်တတ်သလို ဖောက်ဖျက်သူ တွေ့ရင်လဲ မဆက်ဆံတော့ဘူး။
၅) အချိန်နဲ့ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စတွေ၊ ဂတိသစ္စာတွေကို အသက်လိုတန်ဖိုးထားတယ်။ တခါမှ ဘယ်ချိန်းဆိုမှုမျိုးကိုမှ နာရီနောက်ကျပြီး မရောက်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဘယ်ငွေကိုမှ အလွဲသုံးစား မလုပ်ခဲ့ဘူး။ (မိဘပိုက်ဆံကိုတောင် စာရင်းနဲ့တကွ ပြန်အပ်တတ်တယ်)
၆) အလုပ်မရှိရင် မနေတတ်သလို အမြဲပဲ တက်ကြွနေတတ်တယ်။
၇) ကိုယ်လုပ်သလို သူများတွေကိုလဲ အလုပ်ကို စိတ်ပါလက်ပါ တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်စေချင်တယ်။(ဒါ့ကြောင့် တပည့်မွေးလို့ မရခဲ့ဘူး)
၈) ဆရာလုပ်ရတာ ၀ါသနာပါသလို ကိုယ်တပည့်လုပ်ရချိန်မှာလည်း ရိုကျိုးစွာ ခံယူဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။ (ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပညာတော့ ဆရာလုပ်သူမှာ ရှိရမှာပေါ့လေ။ ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ ဆရာလာလုပ်ရင်တော့ မခံဖူးပေါ့)
၉)စကားများများပြောပေမဲ့ တကယ်က စကားမပြောချင်ဆုံးပါ။ (စာအုပ်တွေဖတ် စာတွေရေး အဲလို နေချင်သူပါ)
၁၀)ငွေကြေး၊ အာဏာကို မမက်မောပေမဲ့ အဲဒါတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို သိနေတော့ ငွေကိုတန်ဖိုးထား ရှာတယ်။(ဒါ့ကြောင့် တချို့တွေက ငွေစကားပြောတယ် စွပ်စွဲကြတယ်။ တကယ်က မက်မောလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီငွေနဲ့ တချို့တွေကို အနိုင်ယူလို့ ရတယ်။ တချိ်ု့ကို ဖြေရှင်းလို့ရနေတယ်။ ကောင်းအောင်လုပ်မယ့် လူတွေလက်ထဲမှာ အဲဒီ ၂ ခုရှိဖို့လိုတယ်လို့ ခံယူတယ်။)
၁၁)ဘယ်တော့မှ မတရားတာ မဟုတ်တာ ဘယ်သူ့အပေါ်မှ မလုပ်ဘူး။ ကိုယ့်အပေါ်လုပ်ရင်လဲ သည်းခံစိတ် မထားတတ်သေးဘူး။
၁၂) လူတယောက်ကို ခဏတွေ့ဆုံ စကားပြောပြီးတာနဲ့ ဒီလူနဲ့ ဆက်ပြီးလက်တွဲလို့ရမရ စိတ်ထဲက အမြဲ အဖြေရှိနေတယ်။ အဲဒီအဖြေကလည်း အမြဲပဲ မှန်ခဲ့တယ်။
၁၃) ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အပြစ်ကိုလဲ ကျေကျေနပ်နပ် ခေါင်းခံတတ်ပါတယ်။ သူများက မပြောရဲတာမျိုးကိုလဲ ခေါင်းအငှားခံပြီး ပြောပြတတ်ပါသေးတယ်။
၁၄) အားလပ်ရက်တွေမှာ တခုခုလုပ်စားပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အားရပါးရ နှစ်သက်စွာ စားနေတာကို ကြည့်ပြီးကျေနပ် နေတတ်သေးတယ်။
၁၅)လုပ်မယ်လို့ စစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ နည်းနည်းတွေဝေတတ်ပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ နောက်မဆုတ်တတ်တော့ပါဘူး။
ကဲ.. စဉ်းစားလို့ရသလောက် အချက်တွေ ချရေးလိုက်တာပါ။ အစီအစဉ်ကျ မကျတော့ မသိတော့ဘူး။ ပါးစပ်ဆိုးသူလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ခင်မင်းဇော် ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ … ကျမဘယ်လိုလူလဲ… ဒီလောက်ဆို သိရောပေါ့…
ဘယ်သူတွေ အားမအားမသိပေမယ့် ကျမက ဆက်တက်ချင်သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ရေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စလုံးက ဘော်ဒါဘလော်ဂါများဖြစ်တဲ့…
ကဒေါင်းညင်သာ၊ ကလူသစ် ၊ ၀ါဆိုအိမ်မက်(July Dream) ၊ avril-lover တို့ကို ဆက်တက်ပါတယ်။ ( ယောက်ျားလေး ဘလော်ဂါတွေကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်နော်)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 2:59 PM6comments:
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ အထက်ပါပုံထဲကလို နအဖက ခွင့်ပြုလို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြရတယ်။ ဘာတွေများ ပြောခဲ့ကြမှာပါလိမ့်။ အစိုးရဧည့်ဂေဟာမှာ ဖြစ်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုခွင့်တော့ ရမယ်မထင်ဘူး။ အန်တီစုကို ကျန်းမာစွာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အန်တီ့အပြုံးက လျော့ရဲနေသလားလို့...။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ကို အန်တီစုလို ခေါင်းဆောင်မျိုးမှသာ သယ်ဆောင် နိုင်မှာပါ။ အောင်မြင်အောင် တည်ထောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျမတို့ချစ်တဲ့ အန်တီ့ကို ကျန်းမာနေစေချင်သေးတယ်။ အန်တီ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းဆိုးတွေကိုတော့ ကောလဟာလသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ မှတ်ယူထားပါရစေတော့။
ထက်မြက်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဦးဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသော။ ခိုင်မာသော မတွန့်ဆုတ်သော ဇွဲလုံ့လသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသော ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီလူထုခေါင်းဆောင် ကျန်းမာချမ်းသာလို့ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
အဲဒီတွေ့ဆုံမှုကို ဗွီဒီယိုဖိုင်အဖြစ် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:24 PM 1 comment:
ကုလမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီသည် ၎င်း၏ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသည့် ယနေ့ မပြန်ခင် နာရီပိုင်းအလိုတွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် ရသွားကြောင်း သိရသည်။
ဒီနေ့သတင်းများအရ အန်တီစုနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ ၃ ဦးနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခွင့်ကို နအဖမှ ခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟုထပ်မံ ကြားသိရပါသည်။ မည်သည့်နေ့တွင် တွေ့ဆုံမည် မသိရသေးချေ။
အန်တီစု ကျန်းမာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး ထမ်းရွက်နိုင်ပါစေ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:08 AM No comments:
၈၈ မျိုးဆက် မြေအောက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မမီးမီးရဲ့ သဘောထားလေးကို နှစ်သက်စွာ မျှဝေပေးတာပါ။
ကျမတို့ တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့် ကျမတို့နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင် တဲ့ နေရာတွေမှာ ကျောင်းသားတွေဟာ လူကိုယ်တိုင်၏ သော်လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း တွေသော် လည်းကောင်း ကျမတို့ကို သူတို့ အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်ပါတယ်။ သူတို့ လုပ်မယ့်ဟာ တွေကိုလည်း ကျမတို့ကို သူတို့ ပြောပြပါတယ်။ ကျမတို့က သူတို့ကို ဦးဆောင်မှု မပေးပါဘူး။ သူတို့ရင်တွင်းက ဆန္ဒနဲ့သူတို့ဘာသာ သူတို့ဖေါ်ထုတ်နေကြတာပါ။
ကျမတို့က ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဆိုပြီး ဖွဲ့ထားတာကိုက ကျမတိုချည်းမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ ယနေ့အထိ ကျမတို့မြန်မာပြည်ကို အလင်းရောင်ပွင့်လန်းလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျမတို့အကိုတွေမရှိတော့လည်း ကျမတို့ဆက်လုပ်တယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ ကျမတို့တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း ၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သေမသွားပါဘူး။ နေရာအနှံ့မှာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက် ဖြိုခွင်းဖြိုခွင်း ကျမတို့ ၈၈ ကျောင်းသားမျိုးဆက်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သေမသွားပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ အခုလို ကျောင်းသားတွေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ၁၉၈၈ လိုမျိုး သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုပေါ့၊ အဲဒီလိုဖြစ်မှုမျိုးကြီးကို ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူလူထုတွေ အနေနဲ့ နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီးတော့ မခံစားစေချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးသာ အာဏာကိုသုံးပြီးတော့ လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၉၈၈ ထက်ဆိုးတဲ့ အာဏာရှင်မှန်သမျှ လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့် လူထုအုံကြွမှုကြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အဖွဲ့
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:03 AM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 7:51 AM 1 comment:
(တကယ်က နိုင်ငံတခုမှာ ကျောင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်တယ် ဆိုတာဟာ ဒီမိုကရေစီ အဆုံးစွန် ဆိတ်သုဉ်းနေတာကို ပြတာပဲ)
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ(၁၃) ရက်နေ့ကစလို့ လက်နက်မပါပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကိုယ့်မကျေနပ်ချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ် ဖြိုခွင်းခဲ့တယ်။ နောက်ပြန်လှည့်ပြေးနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ကျည်ဆန်အစစ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့တယ် ။ နောက် ကိုစိုးနိုင်က တလအကြာမှာ ထပ်မံ ကျဆုံးခဲ့ပြန်တယ်။
အဲဒီကစလို့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်တဲ့ ၈၈၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကစလို့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ သာမက တကမ္ဘာလုံးရဲ့ သမိုင်းမှာတောင် မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသေးတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီကစလို့ ဘော့ပင်ကိုင်ပြီး စာအုပ်ဖတ်နေချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေက စာသင်ခန်းကိုစွန့်လွှတ်လို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီကစလို့ တော်လှန်ရေးသည် ငါတို့ကျောင်း ငါတို့တက္ကသိုလ် လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။
အဲဒီကစလို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆက်လက်ရှင်သန်နေခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့တွေ့ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ဆက်လက် ချီတက်နေဦးမယ်။
ငါတို့သည် ငါတို့၏ ခန္ဓာအား မေးကြည့်၏။
(စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးသည်ထိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမည့် ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၁၉ နှစ်မြောက်အမှတ်တရအဖြစ်
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:30 PM No comments:
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး သွေးမြေကျရတဲ့ တလပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြည်တွင်းကဗျာဆရာတစုနဲ့ ကျောင်းသားတစုက ကဗျာရွတ်ပွဲတခုကို တိတ်ဆိတ်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးတွေ သတင်းပေးတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေ အောက်မှာပဲ ကျင်းပရတဲ့ ဒီပွဲလေးမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရတဲ့ ရဟန်းတော်တွေ ကျောင်းသားပြည်သူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်လက်သယ်ပိုး ထမ်းဆောင်သွားပါ့မယ်လို့ နာကျင်စွာနဲ့ သံဓိဌာန်ချခဲ့ကြပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းထဲက ကဗျာရွတ်သံကို နားဆင်ရင်း မျှဝေပေးချင်စိတ်နဲ့ ဒီကဗျာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသံကိုတော့ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တင်မပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
ငါတို့သည် ငါတို့၏ နှလုံးသားများအား မေးကြည့်၏..
ငါတို့သည် ငါတို့၏အသွေးအသားများအား မေးကြည့်၏..
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:30 PM 1 comment:
တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီထံ ပို့ဖို့ လက်မှတ် ၁သန်း ပြည့်အောင် ဒီနေရာမှာ မြန်မြန် ထိုးကြစို့
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:07 PM No comments:
(၂၅၊၁၀၊၂၀၀၇) နေ့လည် ၁နာရီက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နအဖဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံကြစဉ်
ဒီတွေ့ဆုံမှုကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက အသံမထုတ်ပဲ သတင်းကြေညာ ထုတ်လွှင့်သွားတာကို ကြည့်ရပါတယ်။ အန်တီစုပြောတဲ့ စကားတွေကို ဦးအောင်ကြည်က ခေါင်းတခါခါနဲ့ နားထောင်နေတာကို စိတ်မောစွာ မြင်ရပါကြောင်းလဲ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို ခေါင်းမညိတ်တတ်အောင် သင်တန်းအရင် ပေးလိုက်ပုံပါပဲ........
အော်..... ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိလို့ နာမည်ပေးထားတာပဲလေ .....
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:53 PM No comments:
A Monk’s Tale of Protest and Escape From Myanmar
By THOMAS FULLER (The New York Times)
MAE SOT, Thailand, Oct. 25 — A 24-year-old Buddhist monk who says he was one of the leaders of the recent protests in Myanmar and escaped last week paintedapicture on Thursday ofabare-bones group of young monks planning and organizing what becameanationwide uprising.
Duringasix-hour interview in this border town, the monk, Ashin Kovida, said he had been elected the leader ofagroup of 15 of his fellows and led daily protests in Yangon from Sept. 18 through Sept. 27, the day after the authorities began raiding monasteries.
He said he was inspired by the popular uprisings in Yugoslavia against the government of Slobodan Milosevic, videos of which were circulated by dissident groups in Myanmar.
Eight members of his organizing committee are “missing” and six others are hiding in Yangon, he said. He described escaping to Thailand by usingafalse identification card, dyeing his hair blond and wearingacrucifix.
Many details of Mr. Kovida’s account could not be independently confirmed, but his role as an organizer was well known among nongovernmental organizations in Myanmar, formerly Burma, and Western human rights groups.
Hlaing Moe Than, 37,aleading organizer of students in the September demonstrations who also fled to Thailand, was shownapicture of Mr. Kovida on Thursday and confirmed his identity.
“He is one of the famous leaders among the Buddhist monks during the protests,” Hlaing Moe Than said.
Mr. Kovida’s group received financial help from three well-known Burmese dissidents — an actor,acomedian andapoet — but it did not receive foreign aid during the protests, he said.
One of his main preoccupations, he said, was providing food for the thousands of monks who came to Yangon, Myanmar’s main city, to join the protests. He said he also worried about what he called “fake monks,” whom he suspected the military government had planted.
The spark for the demonstrations came on Sept. 5, when the police fired warning shots at protesting monks in Pakokku, in central Myanmar, Mr. Kovida said.
“The first time I heard the information, I was speechless,” he said. “It was an unbelievable thing.”
Older monks and abbots urged the monks to protest in the monasteries, but the younger monks thought protesting in their cloistered world would do no good, he said.
He reached out to students he had met during alms collections and began to plan marches in Yangon.
“We realized that there was no leadership —atrain must havealocomotive,” he said.
He said he helped supervise the printing of hundreds of pamphlets, titled, “The Monks Will Come Out Onto the Streets.”
“We delivered to all the monasteries.” in Yangon, he said. “We tried to distribute to other regions as much as possible.”
On Sept. 18, he led the first column of monks through the streets in Yangon, he said.
On Sept. 19, about 2,000 protesters, including 500 monks, sat on the tiled floor in Sule Pagoda,afocal point of the protests. “To continue demonstrations inapeaceful way we must have leadership,” Mr. Kovida said he told them. “I call on 10 monks to come join me in the front.”
Fifteen monks came forward, he said, to form what they called the Sangga Kosahlal Apahwe, the Monks Representative Group.
“In this country at present we are facing hardships,” he said he told the crowd, after he was elected chairman of the group. “People are starving; prices are rising. Under this military government there are so many human rights abuses. I call on people to come to join together with us. We will continue these protests peacefully every day until we win. If there are no human rights, there is no value ofahuman.”
He said that, foraweek, he met with his group of organizers in the morning and led marches at noon. He said he heard reports on the Burmese-language service of the BBC about other monks who had organized themselves but he had never met them.
Then, on Sept. 26, the government beganaviolent crackdown. Security forces clubbed and tear-gassed protesters, blocked their path and arrested hundreds.
“The police pulled the monks’ robes and beat them,” Mr. Kovida said. “Nuns were stripped of their sarongs.”
He said he escaped by climbing overabrick wall.
The next day, as the crackdown intensified, he said he changed out of his robes and fled toavillage about 40 miles away where, with the help of relatives and friends, he hid in an abandoned wooden hut.
He was so afraid of attracting the attention of neighbors that he suppressed his coughs and never left the dark hut for two weeks, he said. He relieved himself usingaplastic bucket, he said, and friends occasionally dropped off food.
On Oct. 12, his adoptive mother, whom he called Daw Thin Thin Khaing, was detained, news that was immediately relayed to him. He fled into the night, barefoot.
“I ran downalarge road,” he said. “Wheneveracar came I hid in the bushes.”
He headed back to Yangon, he said, where he dyed his hair blond. He boughtacrucifix inalocal market and, several days later, boardedabus heading toward the Thai border.
Usingafalse identity card, he passed about eight checkpoints and reached Myawadi,aborder town, on Oct. 17. The next morning, he said, he crossed the Moei River to Thailand inaboat, bypassing the official border post.
An Oct. 18 article in The New Light of Myanmar, the state-run newspaper, accused him of hiding “48 yellowish high-explosive TNT cartridges” in his monastery.
Now, facing almost certain detention in Myanmar, Mr. Kovida said he would request refugee status in Thailand.
“I have been in the monkhood since I was so young,” he said. “My whole life, I have been studying only Buddhism and peaceful things.”
(တကယ့်ကို လေးစားဖွယ် သတ္တိရှိစွာ ပြည်သူ့ဖက်က ရပ်တည်ခဲ့သူ ဦးဇင်းဦးကောဝိဒအား ဂုဏ်ပြုခြင်းအားဖြင့် အမှတ်တရပို့စ်အဖြစ် တင်ပြထားပါသည်)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:45 PM No comments:
ဖေဖေကိုဂျင်မီ မေမေမနီလာသိန်း တို့နဲ့ သမီးလေးဖြူနေခြည်မင်းယု
မငိုပါနဲ့ သမီးကလေး …
ဟိံသစ္စံ၊ အမှန်ဖက်၍
ဓမ္မစက်နှင့် “ဖျက်”စေသတည်း။ ။
(၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဇနီးမောင်နှံ ကိုဂျင်မီနှင့် မနီလာသိန်းတို့၏ သမီးငယ်သို့ …)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:55 PM No comments:
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကျမတို့ရဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မှတဆင့် ပြည်သူတွေက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တချိန်မှာ တက်လှမ်းသွားတော့မယ့် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ (၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို မွေးနေ့ရှင်မရှိပဲ ကျင်းပခဲ့ရပြန်ပါပြီ။
မင်းကိုနိုင်ဆိုတာနဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို မြင်တယ်...
သူ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီအရာ ၄ ခုကို မြင်ယောင်မိတယ်တဲ့...
ကျမတို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အကိုကြီးတဦးက အဲဒီလို ပြောပြခဲ့တယ်။
သူဟာ ... လူထုနဲ့အတူ ရှိနေတယ်...
လူထုတွေရဲ့ ရဲဝံ့တဲ့စိတ်ကို ဖော်ထုတ်ပေးတယ်...
လူထုကို လက်တွဲ.. လူထုရှေ့က တပ်ဦးက ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ချီတက်တယ်...
(ကိုမင်းကိုနိုင် စစ်ကျွန်ဘ၀က အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လို့ တိုင်းပြည်အကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ...)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:08 PM 1 comment:
၀န်ကြီးတွေ ရန်သူကို အပြတ်ရှင်းဖို့ အမိန့်ပေးနေတဲ့ အသံနဲ့ အခုအသံ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်။
ကျမတို့ တခုခု သိလိုက်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အခု ဗွီဒီယို ဖိုင်ထဲက ဘုန်းကြီးက ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော် ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် (၆၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုဂျင်မီတို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က ပဲခူးကြခတ်ဝိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်ကြီး ရေစက်ချပေးနေပါတယ်။
ကျမကတော့ ကြခတ်ဝိုင်းဘုန်းကြီးအသံလို့ ပြောနေကြတော့ အဖြေဟုတ်မဟုတ် သိချင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တူမတူကို နားထောင်ဆန်းစစ်ပြီးရင် ကွန်မန့်ပေးခဲ့ကြပါဦး။
အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာသူ ခင်မင်းဇော် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:54 AM5comments:
နအဖ သတင်းစာ......တခါတလေတော့ မှန်သား
ဒီပုံကို မှားယွင်း ထည့်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား...
ကိုယ့်လူတွေ ဌာနတိုင်းမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို နအဖ ငြင်းဦးမှာလား....
ပြည်သူတွေ...ဆိုတာ ပြည်သူအချင်းချင်းဘက်မှာပဲ ရပ်တည်မယ်ဆိုတာကို ဦးသန်းရွှေတို့ သဘောပေါက်....
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:51 PM No comments:
ဒီအတိုင်းလုပ်။ အာဏာရှင် အမြစ်ပြုတ်မည်။
၁။ ငါတို့သည် နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များကို အားပေးသော အလုပ်မှန်သမျှကို ရှောင်ရှားမည်။
၂။ ငါတို့သည် နအဖ အတွက် အလုပ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားလုပ်ပေးမည်။ ဖြည်းလေးစွာ လုပ်ပေးမည်။
၃။ ငါတို့သည် နအဖ ၏ အရေးပါသော စက်ကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများ၊ ကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။
၄။ ငါတို့သည် နအဖအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မည့် အရာမှန်သမျှကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။
၅။ ငါတို့သည် နအဖ ထုတ်ဝေသော ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ စာစောင်များကို သပိတ်မှောက်ရမည်။
၆။ ငါတို့သည် နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များပိုင် ဆိုင်များတွင်ဈေးမ၀ယ်တော့ပါ။ နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များ ပိုင် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကို မစားသုံးတော့ပါ။
၇။ ငါတို့သည် နအဖ တို့၏ ဆက်သွယ်ရေး၊ နအဖ၏ အင်ထရာနက် ကွန်ယက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများ အားလုံးကို နှောင့်နှေး ပိတ်ဆို့ အောင်ပြုလုပ်မည်။
၈။ ငါတို့သည် နအဖ နှင့် အဆက်အနွယ်များအား သူတို့နှင့် ထိုက်တန်သည့်အတိုင်း ဆက်ဆံရမည်။ အရေးတယူ မဆက်ဆံတော့ပါ။ ရှောင်ကျဉ်ရေးမူကို လုပ်ဆောင်မည်။
၉။ ငါတို့သည် ရဟန်းတော်များ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများ ကို နအဖ တို့ မတရား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း မခံရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ကြမည်။ လွတ်မြောက်အောင် ကြံဆောင်ပေးကြမည်။ ကျန်ရစ်သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများ ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေးများကို လူအားငွေအားစသည့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ထောက်ပံ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ကြမည်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 2:32 PM No comments:
ဖုန်မှုန့်များ တိုက်ပွဲများ စိန်မှုန်ပွင့်များ
ကျမတို့ တိုင်းပြည်တွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကို အရုပ် အသံ များနှင့် တွေ့မြင် သိရှိခဲ့ရပါသည်။ အသက်စွန့်လွှတ်သွားခဲ့သူ ရဟန်းသံဃာ ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းကို လေးစားစွာ ဦးညွှတ်ရင်း၊ မိမိအတ္တတွေကို တော်လှန်ရင်း အနိုင်ယူကာ၊ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ရန်သူ နအဖကို တုန်လှုပ်စေသည့် သူရဲကောင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တဦးရဲ့ ပရင့်ထုတ်ထားသော ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုမိပြီး ရရှိခံစားလိုက်ရမှုကို မျှဝေပေးချင်စိတ်ဖြင့် ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး စကားလုံးတိုင်း စာကြောင်းတိုင်းကို သေချာခံစား နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့လျှင် ဝေမျှရကျိုးနပ်ပါသည် ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
မကြာမီက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဖွဲ့တခုအတွင်းမှ တိုက်ဖော်တိုက်ဖက်ဟောင်း တဦးနှင့် ကျနော် စကားလက်ဆုံကျ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် အတူပါလာသော ခေတ်ပျက်ဇောတိကများက အာဇာနည်တို့၏ အရိုးပုံပေါ်တွင် အတ္တနိဗ္ဗာန်ဘုံ တည်ဆောက်နေကြကြောင်း သူက ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာ ညည်းတွား ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ကျနော်သည် သူ၏နာကျင်မှုဝေဒနာကို နားလည်မျှဝေ ခံစားခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် အာဇာနည်များထဲမှ ကျနော်လေ့လာ သင်ယူခဲ့ဖူးသော လောကသစ္စာ စိန်မှုန်ပွင့်များကိုလည်း ဆင်ခြင် အောက်မေ့မိပါသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်လောက်မှစ၍ ‘ဘ၀အနက်အဓိပ္ပာယ်’ အမှန်တရားကို သိနားလည်လိုသော အာသာဆန္ဒ ကျနော့်ရင်မှာ ကိန်းအောင်နေခဲ့ပါသည်။ အဖြေတွေ့နိုးနိုးနှင့် လက်လှမ်းမီသမျှစာအုပ်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ဆရာသမားများထံ ကျနော်ဆည်းကပ်ခဲ့ပါသည်။ ရိုးသား စွာဝန်ခံရလျင် ရလာသမျှအဖြေများက ကျနော်၏ဆာလောင်မှုကို မပြေပျောက်စေခဲ့ပါ။ ရင်သည် အလိုမပြည့်မှုဖြင့် လစ်ဟာနေခဲ့ပါသည်။
နောင်အခါကျမှသာ ‘ဘ၀ဆိုသည် တရားမျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မတရားဖိနှိပ်စော်ကားမှုကို ပုန်ကန် တော်လှန်ခြင်း’ ဖြစ်ကြောင်း ကျေနပ်စွာ လက်ခံယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုယုံကြည်မှုကပင် ကျနော့်အား သူပုန် တပ်သား ဘ၀သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လက်တွေ့ တိုက်ပွဲစစ်မြေပြင်တွင် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူအပေါင်း၏ မျက်ရည်များ၊ သွေး၊ ချွေး၊ အသက်များ အဆမတန် စတေးခဲ့ရသည်ကို မြင်တွေ့ လိုက်ရသောအခါ အမှန်တရားအတွက် ပေးဆပ်ရသည့်တန်ဖိုးကား ကြီးမားလွန်းလေစွဟူသော အသိတခု ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအသိက ကျနော့်အား ပုစ္ဆာသစ်တခု ပေးလာ ပါသည်။
‘အမှန်တရားအတွက် အသက်စွန့်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ရဲ့လား။’ ထိုမေးခွန်းသည် ကျနော့်အတွက် ထိုစဉ်က တုန်လှုပ် ချောက်ချားဖွယ် အမှန်တရားတခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သေခြင်းတရား၏ ရက်စက်မှုဖြင့် စိုထိုင်းအေးစက်နေသော လက်ချောင်းများက ကျနော်၏လည်ပင်းကို ပွတ်သပ်ကျီစယ် လိုက်သလို ခံစားခဲ့ရပါသည်။
‘အသင့်ရှိသူ အသက်စွန့်၍ အသင့်မရှိသူ ကြောက်ဒူးတုန်၏။’
‘ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူအနိုင်ရ၍ ကိုယ်ကျိုးကြည့်သူ အညံ့ခံ၏။’
ဤသည်မှာ လက်တွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှ အငြင်းမထွက်သော အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်သည် ဖိနှိပ်မှုကို ကြောက်ဒူးတုန်အရှုံးပေးသူ မဖြစ်ချင်ခဲ့ပါ။ အသက်စွန့်ရန် အသင့်ရှိပြီး အနိုင်ရသူသာ ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် ကျနော့်ကိုယ်တွင်း၌ ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲပေါ်ပါသည်။ ကျနော့် အသိဉာဏ်က ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဖို့ တောင်းဆိုပြီး ကျနော့်အတ္တက ငြင်းဆန်ပါသည်။
မတရားမှုမှန်သမျှကို တိုက်ရသောတိုက်ပွဲသည် မိမိကိုယ်တွင်းမှ အတ္တစိတ်ကို တိုက်ရသော တိုက်ပွဲနှင့် ခွဲမရကြောင်း ထင်ရှားလာပါသည်။ အတ္တစိတ်ကို အနိုင်မတိုက်နိုင်လျှင် မတရားမှု ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုလည်း ဆုံးခန်းတိုင်ပါဝင်ရေးမှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မတရားမှု ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲတွင် မပါဝင်ဘဲ မိမိအတ္တစိတ်ကိုလည်း အနိုင်တိုက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုနှစ်ခုသည် အသက်နှင့် ခန္ဓာလို နှစ်ခုပေါင်းမှ တခုဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်သည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဆင်ရင်း မိမိကိုယ်တွင်းမှ အတ္တစိတ်ကို ချေမှုန်းရန် ပြင်ဆင်ရပါတော့သည်။
အတ္တချေမှုန်းရေးတိုက်ပွဲသည် ပုပ္ပါးတောင်ကို ဖြိူရသလို ဖြစ်လေမလား။
ကျနော့်အာရုံတွင် အာဇာနည်များ၏ပုံရိပ် ဖျတ်ခနဲ လင်းလက်လာပါသည်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်သည် အာဇာနည်များ မွေ့လျော်ရာ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြာလဲ့ကြည်လင်သော တိမ်စင်နွေည မိုးကောင်းကင်တွင် သူတို့ကို အစဉ်မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် မတရားဖိနှိပ်စော်ကားမှု မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ခဲ့ကြသော သူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျနော်တို့ကသာ အမှန်တရားအပေါ် သစ္စာစောင့်သိပါက ကျနော်တို့ရင်ထဲမှ သူတို့၏ သစ္စာစကားသံကို အမြဲတစေကြားနေနိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အကူအညီကို ရယူနိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သူပုန်တယောက်ဖြစ်သော ကျနော်သည် ဓမ္မတာပင် တကျွန်းနှင့် အကျဉ်းထောင်အုတ်ရိုး အတွင်း နှစ်ကာလအတန်ကြာ နေခဲ့ရပါသည်။ တောပန်းတောင်ပန်းတို့ ဝေနေအောင်ပန်ထားလေ့ ရှိသည့် ရှမ်းရိုးမ တောင်တန်းပေါ်တွင် ပြောက်ကျားစစ်သည်တဦးအဖြစ် ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာ လှည့်ပတ်လှုပ်ရှား တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးပါသည်။
အကျဉ်းထောင်၌ဖြစ်စေ ပြောက်ကျားစစ်မြေ၌ဖြစ်စေ သေအံ့မူးမူး တိုက်ဖော်တိုက်ဖက်များကို ကျနော်ကြိမ်ဖန် များစွာ တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ အချို့ ကျနော့်ရင်ခွင်ထက်မှာပင် နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ရှူထုတ်သွားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံများက ကျနော့်အား သင်ကြားပေးခဲ့သည်မှာ သေခြင်း တရားသည် ကျနော်တို့ ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုရိုးစင်းသည် ဆိုသောအချက်နှင့် အတ္တကင်းစင် ကြည်လင်နေသော သူတို့၏ စိတ်ဓာတ်က ကျနော်တို့ကို အစဉ်နိုးကြား နေနိုင်စေစွမ်းရှိသည်ဆိုသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုချန်ထားရစ်ကာ အမည်မသိ ဝေးလံရာတနေရာသို့ ထွက်ခွာသွားကြသယောင် ထင်ရသော်လည်း ကျနော်တို့ နှလုံးသားထဲတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်နေသူများ ဖြစ်သည်ဆိုသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့သည် အဖိနှိပ်ခံလူထုကြီး၏ တရားသောတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားသူများ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အသိရှိစွာ အသစ်တဖန် ပြန် လည် တည်ဆောက် ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့၏ ခန္ဓာကလာပ်စည်းများ၊ သွေးကြောခက်မြွှာများအတွင်း လှည့်ပတ်ပုန်းခိုနေသော အတ္တစိတ်ကို နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ သတိရှိရှိ တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့ကြပါသည်။တိုက်လိုက်ရှုံးလိုက်၊ ထပ်တိုက်လိုက်ထပ်ရှုံးလိုက်နှင့် နောက်ဆုံးတွင်သူတို့ အောင်ပွဲရသွားခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဟောင်းကို ပုန်ကန်ပြောင်းလဲရင်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် အဖိနှိပ်ခံလူသားထုကြီး ချစ်သောအရာကို ချစ်ပြီး မုန်းသောအရာကို မုန်းတတ်ခဲ့ကြပါသည်။ လူထုကြီး ငိုကြွေးသောအခါ သူတို့ ငိုကြွေးကြပီး ရယ်မောပျော်ရွှင်သော အခါသူတို့လည်း ပျော်ရွှင်ရယ်မော ခဲ့ကြပါသည်။သူတို့နှင့်လူထုကြီးအကြား ခြားနားထားသော ဟင်းလင်းပြင်သည် တစတစ ပါးလျား ပျောက်ကွယ် သွားကာ အဆုံး၌ သူတို့သည် လူထုကြီးအဖြစ် လူထုကြီးသည် သူတို့အဖြစ် အပြန်အလှန် ပျော်ဝင်ပေါင်းစည်း သွားကြပါသည်။ လူထုကြီး၏ တန်ခိုးအင်အားမှန်သမျှ သူတို့တဦးချင်းစီ၏ အင်အားအဖြစ် ခုန်ကူးပြောင်း လဲကာ ထိုတန်ခိုးအင်အားမှန်သမျှကို လူထုကြီး၏ တရားသောတိုက်ပွဲအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ကြပါ သည်။
အဖိနှိပ်ခံလူထုကြီး၏ တရားသောတိုက်ပွဲနှင့်ကင်း၍ ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျနော်တို့အား သိမြင်လာစေပါသည်။
သူတို့သည် အခြားသူများနည်းတူ ဘ၀ကို ချစ်ခင်တွယ်တာတတ်သော မွေးရာပါဗီဇစိတ် ရှိကြသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အတ္တမြူမှုန်တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ညစ်ထေးနေသော ထိုဗီဇစိတ်ကို ကိုယ်ပိုင် နိုးကြားမှုအသိစိတ်ဖြင့် တိုက်ပွဲဆင်ဆေးကြောရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း သူတို့ သိမြင်ခဲ့ကြပါ သည်။ ဤသည်မှာ တိုက်ပွဲအတွင်းမှ ရရှိထားသော သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသိပညာ ဖြစ်ပါသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း၏ အသိဆိုင်ရာ အတိမ်အနက်ကို ဖော်ပြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အတ္တဗီဇစိတ် ကို တိုက်ချွတ်သန့်စင်နိုင်သည်နှင့်အမျှ ဘ၀အပေါ် သစ္စာရှိစွာ ခင်တွယ်တတ်သလို သစ္စာရှိစွာပင် စွန့်ခွာနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ကျနော်တို့အား နားလည်လာစေပါသည်။
မိမိဘ၀ကို ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအပေါ် ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းနှင့် ခွဲခြားမရကြောင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပန်းတရုံဖြစ်လျှင် လူသားသည် ပန်းတပွင့်ဖြစ်ပြီး၊ ပန်းရုံ မရှိဘဲ ပန်းမပွင့်နိုင်သလို ပန်းများ မပွင့်သော ပန်းရုံသည် မတင့်တယ်နိုင်ကြောင်း သူတို့၏ လက်တွေ့ လုပ်ဟန်များဖြင့် ကျနော်တို့၏ အသိတရားကို လေးနက်စေပါသည်။ သူတို့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုအတွက်ပင် အသိရှိစွာ သေဆုံး ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့၏ ချစ်သူဇနီးမယားများ၊ မိဘမောင်ဖွား အဆွေခင်ပွန်းများ၊ ရဲဘော် ရဲဘက်များ စသည့် ချိုမြစွာနှောင်ဖွဲ့ထားသော ရွှေရောင် သံယောဇဉ်ပိုးကြိုးများကို ညင်သာစွာ ဖြေလျော့သိမ်းဆည်းကာ တရားမျှတမှုအတွက် သေခြင်းတရားနှင့် စီးချင်းထိုးခဲ့ ကြပါသည်။ သူတို့သည် အသက်ရှင်နေစဉ်မှာပင် ရိုးစင်းသော သေခြင်းတရား၏ လျို့ဝှက်ချက်ကို သိမြင်ကာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းခဲ့ ကြပါသည်။ အတ္တအညစ်အကြေး စင်ကြယ်သောစိတ်သည် သေခြင်းတရား၏ ရိုးစင်းမှုနှင့် လျို့ဝှက်ချက်ကို နားလည်စေနိုင်ကြောင်း၊ အတ္တနှင့်ကင်းလေ အမှန်တရားနှင့် ပိုနီးလေဖြစ်ကြောင်း သူတို့ ၏ စွန့်လွှတ်မှု အတိုင်းအတာ အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြသခဲ့ကြပါသည်။
လူအတော်များများအတွက် အနာဂတ်သည် ရောက်မလာသေးသော မရေမရာ အာရုံရိပ်တခု ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ဝေးလံသီခေါင်သော မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတံစက်မြိတ်မှေ၀၀ါးဝါး အလင်းတစ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ သူတို့အဖို့မူ အနာဂတ်သည် သူတို့နှလုံးသားထဲမှ ရှိနေနှင့်ပြီး ထွန်းသစ်စနေတစင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့၏ ထက်သန်သော အနာဂတ်အပေါ် ယုံကြည်မှုက အနာဂတ်ကာလတွင်မှ ရရှိမည့် ဆုလာဘ်ကို ပစ္စုပ္ပန်မှာပင် သူတို့အား ချီးမြှင့်အပ်နှင်းလိုက်ပါသည်။ ထိုဆုလာဘ်မှာ တော်လှန်သော သူရဲကောင်းတို့၏ အောင်ပွဲခံစိတ်ဓာတ် ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ် အောင်ပွဲအပေါ် သံသယရှိသူများ နားမလည်နိုင်သော အရာပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့သည် ‘အမှောင်တွင်း၌ ကျိန်စာသင့်ပြီး အသက်ရှင်ရခြင်းထက် အလင်းရောင်ကို ရှာဖွေရင်း သေရသည် ကမှ မြတ်သေးသည်’ ဟူသော အမှန်တရားကို သစ္စာရှိစွာ ယုံကြည်နိုင်စွမ်းရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် အလင်းရောင်ကို ရှာဖွေရင်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် အလင်းအဖြစ် အဆန်း တကြယ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပါသည်။ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရင်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင် အမှန်တရား ဖြစ်သွားကြပါသည်။
အလင်းသည် သူကိုယ်တိုင်က အလင်းဖြစ်မှသာ အခြားအရာများအတွက် အလင်းရောင်ဖြန့် ဝေပေးနိုင်ပါသည်။ အမှန်တရားသည် သူကိုယ်တိုင်က မှန်နေမှသာ အခြားအရာများကို အမှန်မြင် လာအောင် သင်ကြား ပေးနိုင်ပါသည်။ အာဇာနည်များသည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အမှန်တရားများဖြင့် လူသားတို့၏ အနာဂတ်ခရီးကို လမ်းပြနိုင်ကြပါသည်။
အဓိပ္ပာယ်တခုအရ အာဇာနည်ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ၊ အစုအပေါင်းဖြစ်ပါသည်။ မပြည့်စုံမှု မဟုတ်ပါ၊ ပြည့်စုံမှုဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းမှုမဟုတ်ပါ၊ မှန်ကန်မှုဖြစ်ပါသည်။ အမှောင်ထဲက မမြင်ရသောအရာ မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ်ပိုင်အလင်းဆောင် ကြယ်တာရာဖြစ်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက် မဟုတ်ပါ၊ အကြွင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သေဆုံးမှု မဟုတ်ပါ၊ ထာဝရရှင်သန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြားအဓိပ္ပာယ်တခုအရဆိုလျှင် သက်ရှိထင်ရှား တိုက်ပွဲကာလ၌ သူတို့သည် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမည်နာမကိုယ်စီ ရှိကြပါသည်။ လူမျိုးအသားအရောင် ခြားနားကြပါသည်။ ကျား၊ မလိင်ကွဲပြားပါသည်။ စရိုက်သဘာဝကိုယ်စီ ထွေပြားပါသည်။ အမှန်အမှား ဒွန်တွဲပါသည်။ မွေးဖွားခြင်း သေဆုံးခြင်းမကင်းပါ။ အကြွင်းမဲ့မဟုတ်၊ နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဖိနှိပ်ခံလူသားအပေါင်း၏ တရားသောတိုက်ပွဲ ‘လုံ’ အတွင်းထည့်ကာ ဖိုကျင်ထိုး မီးပြင်းပေးလိုက်ပြီးနောက် အပေါ်ယံအကာ ချေးညှော်မှန်သမျှ ကွာကျ သန့်စင်သွားပါသည်။ ငရဲမီးအတင်ခံသော ဇမ္ဗူရာဇ်ရွှေစင်အဖြစ် ဘ၀ကူးသွားပါသည်။ ထိုအရာသည် ကြီးမြတ် သော မဟာအာဇာနည် ဖြစ်ပါသည်။
အာဇာနည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ယှဉ်တွဲရှုမြင်ခြင်းဖြင့် အမည်နာမရှိသူ သူရဲကောင်းကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ အတွက် အတုယူစရာ စံပြနမူနာပုဂ္ဂိုလ်များ ရရှိစေပါသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုပြုပြင် တည်ဆောက်ခဲကြသည်၊ အမှားကိုဘယ်လိုမြင်ပြီး ဘယ်လိုပြင်ခဲ့ကြသည်၊ အခက်အခဲကို ဘယ်လို ကျော်နင်းခဲ့ကြသည် ဆိုသည့် ရပ်တည်မှု၊ အမြင်၊ နည်းနာများကို လေ့လာနားလည် လာစေနိုင်ပါသည်။
အာဇာနည်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ခွဲခြားရှုမြင်ခြင်းဖြင့် အကောင်အထည်မဲ့သဘော ဖြစ်တည်လာပါသည်။ ကျနော်တို့၏ အခိုင်အမာ လက်တွေ့တိုက်ပွဲတွင်းမှ စုဆောင်းရရှိခဲ့သော တလောကလုံးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်မဲ့ အမှန်တရားကို ပိုမိုကြည်လင် ပြတ်သားစွာ နားလည်လာစေနိုင်ပါသည်။ ရေရှည်သဘော၊ တခုလုံးသဘော၊ မုချသဘောတို့၏ ရှေ့နောက်ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှု တသီတတန်းကြီးအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချ နိုင်စွမ်း အားကောင်းလာစေပါသည်။
သူတို့သည် လက်တွေ့တိုက်ပွဲတွင်းမှ စုဆောင်းရရှိထားသော အမှန်တရားတို့ကို စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အာဝဇန်းရွှင်စွာ ပြန်လည်သင်ကြား ပြသနိုင်သူများ ဟုတ်ကောင်းမှ ဟုတ်မည်ဖြစ် သော်လည်း သူတို့၏ လက်တွေ့လုပ်ငန်းများဖြင့် အကောင်းဆုံး သင်ကြားပေးနိုင်သည့် ဆရာမြတ် များဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကသာ ကျိုးနွံစွာ သင်ယူလေ့လာဖို့ လိုပါသည်။
သူတို့သည် သူတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သော တိုက်ပွဲရလဒ်များ ခံစားခွင့်မရမီ ကျဆုံးသွားနိုင်သည့်အဖြစ်ကို ကြိုတင်သိမြင်ထားကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ပွဲလမ်းခုလတ်၌ သူတို့၏ အရိုးပုံပေါ်တွင် အတ္တ၀ါဒီများ၊ သစ္စာဖောက် အချောင်သမားများက ခေါင်းပေါင်းစတလူလူဖြင့် အတ္တ နိဗ္ဗာန်ဘုံ တည်ဆောက်နိုင်စရာ ရှိမှုကိုလည်း သိမြင်နားလည်ခဲ့ကြသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖြစ်မျိုးသည် ကြေကွဲဖွယ်ရာ အထောင်၊ အသောင်းအနက် ကြေကွဲဖွယ်အကောင်းဆုံး၊ နာကြည်း ဖွယ်ရာ အထောင်၊ အသောင်းအနက် နာကြဉ်းဖွယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်တိုင် အောင်ပွဲအတွက် အသက်စွန့်ပေးလှူရန် နောက်ဆုံးပိတ် အာဇာနည်တဦး လိုအပ်နေသည် ဆိုလျှင် ထိုလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အသင့်ရှိနေသူများ ဖြစ်ပါသည်။
ရုရှားစာရေးဆရာကြီး မက်ဇင်းဂေါ်ကီ၏ အမေကြီး အိုအီဇာဂျယ်ပုံပြင်ထဲမှ အာဇာနည် ဒန်ကို ၏ တိုက်ပွဲဝင် အောင်ပွဲခံ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော ပုံရိပ်ကို အာရုံပိတ်ကားပေါ်မှာ ထင်မြင်ကြည့် လိုက်ကြစမ်းပါ ဒုက္ခနွံအိုင်ထဲက ဘ၀တူလူသားတို့ အပေါ်ထားရှိသည့် ဟင်းလင်းပြင်လို ကျယ်ပြောနက်ရှိုင်းသော မေတ္တာစိတ်ကြောင့် ကြယ်တစင်းလို လင်းနေသော နှလုံးသားရှိသူ၊ ရင်ကိုခွဲ၍ နှလုံးသား မီးအိမ်နီကို ဆွဲထုတ်ကိုင်မြှောက်ကာ ပူပန်ငိုကြွေးနေသော လူသားအပေါင်းအား လမ်းပြရှေ့ဆောင် ခဲ့သူ၊ ဘေးဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ပန်းတိုင်အရောက် လဲကျသေဆုံးချိန်၌ သူ့နှလုံးသား မီးအိမ်ကို ငြိမ်းသတ်ရန် ခြေဖြင့်နင်းချေခဲ့သော စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် အမည်မသိလူတယောက်။ သို့တိုင် နှလုံးသားအလင်းသည် ငြိမ်းသေမသွားရုံမက စတက်မြက်ခင်းပြင်ကြီးအနှံ့ ပြန့်သွားခဲ့သည့် အဖြစ်။ ပုံပြင်နိဂုံးသည် နိဂုံးနှင့်မတူဘဲ ဂုဏ်ယူလေးနက်ဖွယ်ရာ၊ တက်ကြွဖွယ်ရာ၊ စက်ဆုပ်နာ ကြည်းဖွယ်ရာတို့ဖြင့် ကမ္ဘာကုန်ကျယ်သရွေ့ ကဆုန်စိုင်းပြေးလွှား စီးဆင်းနေတော့မည့် တောင်ကျ ရေတံခွန်တခု၏ နိဒါန်းအစလို။
အောင်ပွဲဥယျာဉ်မုခ်ဦးသို့ ရောက်သည်နှင့် အရေးတော်ပုံအတွက် ရက်ရောစွာ အသက်ပေး လှူခဲ့ကြသူ အာဇာနည် အပေါင်းအား မေ့လျော့ပစ်လိုက်ကြသူများ၊ မေ့လျော့ပစ်လိုသူများ၊ အာဇာနည်တို့၏ အရိုးပုံပေါ်တွင် အတ္တနိဗ္ဗန်ဘုံတည်ဆောက်ကြသူ ကိုယ်ကျိုးရှာသမားများ၊ သစ္စာဖောက် အချောင်သမားများ ဤကမ္ဘာ မြေပြင်ပေါ်တွင် အမှန်တကယ်ပင် ရှိကြပါသည်။
ထိခိုက်နာကျင်ဖွယ်ရာ ထိုဖြစ်ရပ်မျိုးအတွက် လေးနက်ပြည့်စုံ၍ ထိုက်တန်တည်ကြည်သော စကားလုံးတလုံး၊ ၀ါကျတကြောင်း ရေးပြရန်မှာ လွန်စွာခက်ခဲလှပါသည်။
ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတို့သည် သူတို့၏ ပစ္စုပ္ပန်ခဏအတွက် မအောင်မြင်သော ခိုးယူခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ကို ခိုးယူရန် ကြံစည်ကြရင်း အတိတ်၏ အညစ်အကြေးနွံအိုင်ထဲ၌ လဲကျသေဆုံး ရမြဲဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူများကမူ သူတို့၏ကိုယ်ပေါ်မှာ အတိတ်၏ဖုံမှုန့်များကို ပုတ်ခါသန့်စင်လျက် တောက်ပသော အနာဂတ်အတွက် ပစ္စုပ္ပန်၌ မွေ့လျှော်ရှင်သန် တော်လှန်နိုင်စွမ်း ရှိကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။
(၁၄၊ ၁၂ ၊၂၀၀၅ ခေတ်ပြိုင် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှ)
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:26 AM No comments: